बजारमा सर्वश्रेष्ठ TikTok बट्स
बजारमा सबै भन्दा राम्रो TikTok बटहरू र तपाईंको खाता कसरी सुरक्षित गर्ने
शैली स्वचालन पालना/अनफलो गर्नुहोस्
एक निर्मित प्रोक्सी संग धेरै सुरक्षित
स्मार्ट एल्गोरिथ्म र छिटो गति
थप विवरणहरूको लागि
यस समयमा कुनै नि: शुल्क परीक्षण छैन
स्वचालित शैलीहरू जस्तै
सुरक्षित सेटिङहरू तर कुनै प्रोक्सी छैन
आधारभूत प्याकेजमा पनि स्मार्ट सेटिङहरू
कुनै परीक्षण छैन - $ 15 प्रति हप्ता
मोटर चालित स्वचालन जस्तै
सुरक्षित प्लेटफर्म तर कुनै प्रोक्सी छैन
स्मार्ट लक्ष्यीकरण र सेटिङहरू
कुनै नि: शुल्क परीक्षण उपलब्ध छैन
शैली बटलाई पछ्याउनुहोस्/पछ्याउनुहोस्
उन्नत सेटिङहरू र समर्थन
कुनै परीक्षण छैन तर प्रति महिना $ 15 मा किफायती
फलो/अनफलो/लाइकमा आधारित स्वचालन
कुनै प्रोक्सीहरू छैनन्, यथोचित रूपमा निश्चित
सटीक लक्ष्यीकरण र राम्रो प्रदर्शन
कुनै परीक्षण उपलब्ध छैन
कुनै प्रोक्सी छैन तर धेरै सुरक्षित प्लेटफर्म
स्मार्ट लक्ष्यीकरण र गति समायोजन
फलो/अनफलो/लाइक स्टाइल बोट
कुनै प्रोक्सी सेटिङहरू उपलब्ध छैनन्
TikTok पछिल्लो सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म हो जसले सेप्टेम्बर 2016 मा यसको रिलीज पछि अभूतपूर्व वृद्धि देखेको छ।.
यो छलांग र सीमाहरु द्वारा बढेको छ र शीर्ष सामाजिक मिडिया प्रतियोगीहरु मध्ये एक भएको छ, र राम्रो कारणको लागि.
टिक टक एक प्रकारको मार्केटरको सपना हो, सत्र अवधि र संलग्नता दर को सबै प्लेटफर्महरु को उच्चतम बीच सामाजिक संजाल.
त्यसकारण यो अचम्मको कुरा होइन कि अहिले बजारमा विशिष्ट कार्यहरू स्वचालित गर्न TikTok बटहरू छन्।, कसरी पालन गर्ने, स्क्रिन गर्न, कमेन्ट र पोस्ट लाईक गर्नुहोस्.
हामी के बटहरू उपलब्ध छन् जान्न चाहन्थ्यौं, तिनीहरूले कति राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् र तिनीहरू प्रभावकारी र मार्केटरहरू द्वारा विचार गर्न लायक छन्.
मुख्य TikTok Bots
हामीले आज उपलब्ध सबैभन्दा लोकप्रिय TikTok Bots को7समीक्षा गरेका छौं:
Tik Tok Bot - बजारमा सबैभन्दा राम्रो TikTok Bot, #1 टाढा सम्म.
TikTool - राम्रो वृद्धि, भरपर्दो, स्मार्ट सुविधाहरू संग – #२.
TokUpgrade - स्थापना गर्नुहोस् र बिर्सनुहोस् – n°3
जेफ्री - राम्रो विश्लेषण संग एक राम्रो प्लेटफर्म – n°4.
इन्स्टाम्ब - एक सरल दृष्टिकोण जसले राम्रोसँग काम गर्दछ – n°5.
टोक ग्रोथ - शुरुआतीहरूका लागि उत्कृष्ट तर केन्द्रित रूपमा होइन – n°6.
विरे - अन्य सेवाहरूको तुलनामा ढिलो स्वचालन – n°7.
TikTokBot.io तपाईंलाई स्वचालित संलग्नता मार्फत तपाईंको खाता बढाउन मद्दत गर्दछ र बोट कति लामो समयसम्म चलिरहेको छ भन्ने आधारमा तपाईंलाई हजारौं अनुयायीहरू ल्याउने क्षमता छ।.
हामीले TikTokBot केही हप्ता चल्यौं र सुविधाहरू र परिणामहरूको गुणस्तरबाट प्रभावित भयौं.
स्थापना छिटो र सजिलो थियो, र तपाइँको स्वचालन संग खेल्न र अनुकूलन गर्न धेरै सुविधाहरू छन्.
मूल्य – $$ – $29.90 p/m
विशेषताहरु – ४/५ – बहु लक्ष्यीकरण विकल्पहरूको साथ स्वचालनलाई पछ्याउनुहोस्/पछ्याउनुहोस्, स्मार्ट एल्गोरिथ्म र विश्लेषण.
सुरक्षा – ४.५/५ – सुरक्षित जडान र मोबाइल प्रोक्सी समावेश छ.
सहयोग – ४.५/५ – तपाइँको यात्रा मा मद्दत गर्न प्रीमियम ग्राहक समर्थन.
नोट – ४.५/५ – यो सबै क्षेत्रहरूमा उत्कृष्ट छ र हामीले विशेष गरी प्रयोगको सहजता र सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्यौं।.
TikTool केहि अतिरिक्त सुविधाहरूको साथ मानक फलो/अनफलो शैली स्वचालन प्रयोग गर्दछ.
स्मार्ट सुझाव उपकरण र एक ह्यासट्याग खोजकर्ताले यसलाई प्रतिस्पर्धामा हल्का किनारा दिन्छ.
आधारभूत विकल्प को मूल्य धेरै उच्च छ, प्रिमियम सेवा को, छिटो र उच्च, उच्च छ.
मूल्य – $$ – $२९ p/m
विशेषताहरु – ४.५/५ – उत्कृष्ट सुविधाहरू, स्मार्ट ह्यासट्याग र सुझावहरू सहित.
सुरक्षा – इन्स्टाग्राम स्वचालन समाचार/इन्स्टाग्राम स्वचालन समाचार – सुरक्षित प्लेटफर्म तर कुनै बिल्ट-इन प्रोक्सी विकल्पहरू छैनन्.
सहयोग – ३.५/५ – आधारभूत समर्थन जबसम्म तपाइँ प्रिमियम सेवाको लागि दोब्बर मूल्यमा छनौट गर्नुहुन्न.
नोट – ४/५ – धेरै राम्रो प्लेटफर्म तर कुनै प्रोक्सीले यसलाई तल दिँदैन.
Tokupgrade धेरै प्रशंसा पाए, त्यसैले हामीले यो प्रयास गर्नुपर्‍यो.
तपाईलाई सुरु गर्न तिनीहरूसँग दुईवटा योजनाहरू छन् – नियमित र प्रो.
दुवै अवस्थामा, तपाईंले एक समर्पित खाता प्रबन्धक र पूर्ण समर्थन पाउनुहुन्छ.
मूल्य – $$$ – $60-100 p/m
विशेषताहरु – ३.५/५ – उत्कृष्ट फिल्टरिङ तर खाताहरूमा आधारित लक्ष्यीकरण.
सुरक्षा – ३.५/इन्स्टाग्राम स्वचालन समाचार – सुरक्षित प्लेटफर्म तर प्रोक्सी हेर्न राम्रो हुनेछ.
सहयोग – ४/५ – खाता प्रबन्धक समावेश.
नोट – ३.५/५ – सभ्य सेवा तर यस मूल्य बिन्दुमा थप सुरक्षा चाहिन्छ.
जेफरी एक महान TikTok bot को नाम हो.
ती अनुयायीहरू ल्याउन सुरु गर्न मानक फलो/अनफलो स्वचालन.
तिनीहरूसँग दुईवटा सशुल्क योजनाहरू छन् – उद्यम सुरु हुन्छ, जसले 349 को खगोलीय योगफल दिन्छ,$99 प्रति महिना.
अहिले सम्म, रिपोर्टहरू धेरै राम्रो छन् र तिनीहरूले धेरै सकारात्मक समीक्षा प्राप्त गरेका छन्.
मूल्य – $$$ – $४९.९९ p/m
विशेषताहरु – ४/५ – लक्षित गर्दै, स्मार्ट तथ्याङ्क र सेटिङहरूले प्रयोगको ठूलो सहजता प्रदान गर्दछ.
सुरक्षा – इन्स्टाग्राम स्वचालन समाचार/इन्स्टाग्राम स्वचालन समाचार – सुरक्षित प्लेटफर्म र निजी प्रोक्सी समावेश.
सहयोग – ४/५ – 24 घण्टा ग्राहक समर्थन,7मा7दिन.
नोट – ४/५ – उत्कृष्ट स्वचालन जसले सबै बक्सहरू टिक्छ, थोरै महँगो.
इन्स्टाम्ब Le bot TikTok, Auto Tokker जस्तै, तपाईंलाई स्वचालित लाइक र अनुयायीहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ, ती सबै प्रयोगकर्ता नाम र ह्यासट्यागमा आधारित छन्.
यो सस्तो छ, तर तैपनि तपाइँको TikTok बढाउनको लागि राम्रो प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ.
यो स्केलको सस्तो अन्त्यमा छ तर अझै पनि तपाइँको TikTok बढाउनको लागि राम्रो प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ.
मूल्य – $ – $15 p/m
विशेषताहरु – ३.५/५ – मानक प्रयोगकर्ता नाम र ह्यासट्याग लक्ष्यीकरण.
सुरक्षा – इन्स्टाग्राम स्वचालन समाचार/इन्स्टाग्राम स्वचालन समाचार – सुरक्षित जडान तर कुनै प्रोक्सी विकल्प छैन.
सहयोग – ३.५/५ – अनलाइन समर्थन.
नोट – ३.५/५ – राम्रो स्वचालन सेवा, तर प्रोक्सी चाहिन्छ.
टोक ग्रोथ राम्रो सुविधाहरू प्रदान गर्ने एक कुशल सेवा हो.
उसले सामान्य दृष्टिकोण अपनायो जसमा २ वटा सूत्र प्रस्तावित हुन्छ, स्टार्टर र प्रो.
प्रो ले तपाईंलाई धेरै राम्रो सेटिङहरू दिन्छ, तर उच्च मूल्यमा.
विशेषताहरु – ३.५/५ – ह्यासट्याग केवल स्टार्टर प्लानमा लक्षित.
सुरक्षा – इन्स्टाग्राम स्वचालन समाचार/इन्स्टाग्राम स्वचालन समाचार – सुरक्षित प्लेटफर्म तर कुनै प्रोक्सी विकल्पहरू छैनन्.
सहयोग – ३/५ – समर्पित समर्थनको अभाव.
नोट – इन्स्टाग्राम स्वचालन समाचार/५ – खराब छैन, तर मूल्यको लागि, यो अझै राम्रो हुन सक्थ्यो.
विरे भर्खरै धेरै प्रचार भयो, तर हामी पक्का छैनौं कि यो जायज छ कि छैन.
हामीले समीक्षा गरेका सबै प्लेटफर्महरू, यो एक हो जुन कम से कम सुविधाहरू संग सबैभन्दा महँगो देखिन्छ.
यद्यपि, यसले पूर्ण खाता व्यवस्थापन प्रदान गर्दछ, जसले केही मानिसहरूलाई अपील गर्न सक्छ.
मूल्य – $$$ – $100 p/m
विशेषताहरु – ३/५ – ह्यासट्याग लक्ष्यीकरण र केहि अन्य सुविधाहरू.
सुरक्षा – इन्स्टाग्राम स्वचालन समाचार/इन्स्टाग्राम स्वचालन समाचार – प्रोक्सी अनुकूलताको कुनै प्रमाण छैन.
सहयोग – ४/५ – खाता प्रबन्धक र अनलाइन समर्थन.
नोट – इन्स्टाग्राम स्वचालन समाचार/५ – Il n’est malheureusement pas à la hauteur du battage médiatique.
तपाइँको Tik Tok खातालाई प्रतिबन्धबाट कसरी सुरक्षित गर्ने ?
सामाजिक मिडिया केहि समय को लागी प्रतिबन्धित गरिएको छ र यो यहाँ राम्रो कारणहरु को लागी छ.
तिनीहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै वृद्धि कायम गर्न सीमाहरू दुरुपयोग गर्नबाट रोक्छन्, जसले कहिलेकाहीँ तपाईका अनुयायीहरू बढाउन गाह्रो बनाउन सक्छ.
यी सीमाहरू सधैं ठाउँमा रहनेछन्, त्यसैले तपाईले आफ्नो TikTok खाता सुरक्षित गर्न सक्नुहुने सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको प्रयोग गर्नु हो प्रोक्सी मोबाइल.
मोबाइल प्रोक्सी भनेको TikTok मा तपाईंको जडान मोबाइल ब्राउजर जस्तै हो, यदि तपाइँ सीमा नाघ्नुभयो भने तपाइँको विश्वास स्कोर प्रभावित हुनेछैन भनेर सुनिश्चित गर्दछ.
यो सम्झना महत्त्वपूर्ण छ कि अवरुद्ध हुनु र प्रतिबन्धित हुनु दुई फरक कुराहरू हुन्।, तल देखाइएको रूपमा:
ब्लक भनेको सामान्यतया तपाईंलाई कार्यहरू गर्नबाट रोकिएको हो भन्ने हो
तपाईंको खाता अस्थायी वा स्थायी रूपमा सेवाबाट हटाइएमा प्रतिबन्ध जारी गरिन्छ।
तपाईको TikTok खाता किन बन्द छ? ?
तपाईको TikTok खाता विभिन्न कारणले ब्लक हुन सक्छ.
यो सामान्यतया हुन्छ जब:
तपाईंले धेरै मानिसहरूलाई धेरै छिटो पछ्याउनु हुन्छ
तपाईलाई धेरै पोस्टहरू मनपर्छ
तपाइँ धेरै पटक टिप्पणी गर्नुहुन्छ
तपाईंका टिप्पणीहरू स्प्यामी प्रकृतिका छन्
तपाइँ केहि पोस्ट गर्नुहुन्छ जुन सामुदायिक दिशानिर्देशहरू विरुद्ध छ
यदि तपाइँ TikTok समुदाय दिशानिर्देशहरू पालना गर्नुहुन्छ र अश्लील पोस्ट नगर्नुहोस्, तपाईलाई सायद कुनै समस्या हुनेछैन.
तपाईको खाता अवरुद्ध हुनुको मुख्य कारण के हो ?
“साइबरबुलिङ सामग्रीमा सहभागिता, उत्पीडन वा घृणायुक्त भाषण वा उनीहरूको जातिको कारणले एक व्यक्ति वा मानिसहरूको समूह विरुद्ध घृणा गर्न उक्साउने, आफ्नो जातियता को, आफ्नो धर्मको, आफ्नो राष्ट्रियता को, आफ्नो संस्कृति को, आफ्नो असक्षमता को, तिनीहरूको यौन झुकावको, तिनीहरूको सेक्सको, तिनीहरूको यौन पहिचान, तिनीहरूको उमेर वा अन्य कुनै भेदभाव निषेधित हुन सक्छ” सामुदायिक दिशानिर्देश अनुसार.
खाली पोस्टहरू – यो एक स्पष्ट कारण हो र धेरै मानिसहरूको लागि समस्या उत्पन्न भएको छ इन्स्टाग्राम. कुनै पनि सोशल मिडिया कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्ममा नग्नता चाहँदैन, विशेष गरी एक युवा दर्शकलाई लक्षित. सबै भिडियोहरू सफा राख्न यो राम्रो सुझाव हो.
बन्दुक वा अवैध ड्रग्स बारे सन्देशहरू पोस्ट गर्नुहोस् – बन्दुक वा लागूपदार्थको बारेमा कुनै पनि पोस्टहरू सामुदायिक दिशानिर्देशहरू विरुद्ध छन् र लामो प्रतिबन्धको विषय हुन सक्छ.
प्रतिलिपि अधिकार सामग्रीको प्रकाशन – तपाइँको TikTok भिडियोहरूमा प्रतिलिपि अधिकार भएको सामग्री पुन: प्रयोग नगर्न सिफारिस गरिन्छ. अन्य लोकप्रिय प्रयोगकर्ताका भिडियोहरूको स्पष्ट प्रजनन सिर्जना गर्दा चोरी प्रतिबन्धको परिणाम हुन सक्छ.
TikTok प्रतिबन्ध कति लामो रहन्छ ?
प्रतिबन्धको सबैभन्दा सामान्य अवधि लगभग 14 दिन हो.
जे होस्, यदि तपाइँ लगातार सामुदायिक दिशानिर्देशहरू उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ भने, तपाईं लामो, अनिश्चितकालीन प्रतिबन्धको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ.
स्टिल्थ प्रतिबन्धको साथ कसरी व्यवहार गर्ने ?
यदि तपाइँको खाता लोकप्रिय छ भने तपाइँ पर्खन सक्नुहुन्छ. तपाईं नयाँ Tik Tok खाता पनि बनाउन सक्नुहुन्छ.
केही प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको आईपी ठेगाना पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्छन्, त्यसैले यसलाई ठीक गर्ने एक मात्र तरिका तपाईको आईपी ठेगाना परिवर्तन गर्नु हो.
अघिल्लो लेख२०२० मा सबै भन्दा राम्रो इन्स्टाग्राम बटहरू के हुन् र तपाईंको खाता कसरी सुरक्षित राख्ने?
अर्को लेखरील इन्स्टाग्राम : TikTok लाई इन्स्टाग्राम को प्रतिक्रिया